Mahad Salaad oo beeniyay in qof labaad oo Muqdisho joogo laga helay cudurka Coronovirus - Bandhiga Media
Mahad Salaad oo beeniyay in qof labaad oo Muqdisho joogo laga helay cudurka Coronovirus
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa beeniyay war mardhaw kasoo baxay wasaradda caafimaadka oo lagu sheegay in qof ka yimid Talyaaniga laga helay caabuqa.
Hoos ka akhriso qoraalka Mahad Salaad
Waxaan mardhow wada hadalnay wiilka la yiri waxaad qabtaa caabuqa Coronavirus wuxuu ii sheegay in uusan arag wax calaamad ah oo muujinaya in uu qabo xanuunkaan. Wiilkaan ayaa ka mid ah dhalinyaradii saraakiisha ciidamada Soomaaliya ee tababarka u aaday dalka Talyaaniga oo dhowaan dib ugu soo laabtay magaalada Mogadishu, mudo 9 beri ah ayuuna meel ku karantiilnaa isaga iyo dhalinyaradii la socday.
Haddaba, su’aashu waxay tahay qof 9 maalmood meel ku karantiilnaa, ilaa hadana wax calaamad ah oo muujinaya in uu qabo xanuunkaas aysan jirin sidee loo dhihi karaa waad xanuunsan tahay. Sidoo kale sida Wasaarada Caafimaadka noo sheegtay qalab lagu baaro cudurkaan ma yaalo Soomaaliya marka sidee ku ogaadeen?
Waxaa ii muuqda cudurkaan in uu noqday mashruuc lagu qaraabanayo oo la rabo aduunka in lacag looga cuno, mana ahan wax la aqbali karo in dadka Soomaaliyeed la argagax geliyo si dhaqaale looga sameeyo. Sidaas daraadeed waxaan ku talinayaa saraakiisha Wasaarada Caafimaadka ee arintaan sheegay in aan looga harin sheegashadooda ee baaritaan dheeri ah la sameeyo!
Deg Deg: Soomaaliya oo laga helay qofkii Labaad ee qaba cudurka Coronovirus